LCD လား ? OLED လား ? | Anycall Mobile
LCD လား ? OLED လား ?
Nyein Aung Htet,9months ago2min read 495
ဒီတစ်ခါတော့ ဖုန်းတွေအကြောင်း မပြောဘဲ ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ Display နည်းပညာတွေ အကြောင်း ပြောရအောင် လားဗျာ…။
ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ ဖုန်းအများစုမှာ LCD နဲ့ OLED ဆိုတဲ့ Display နည်းပညာနှစ်ခုကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။
ဒါဆို အဲ့နှစ်ခုက ဘယ်လို ကွာခြားတာလဲ? ဘာတွေ ပိုကောင်းပြီး ဘာတွေမှာ အားနည်းနေတာလဲ? ဘာဖြစ်လို့ ဈေးကြီးတဲ့ Flagship ဖုန်းတွေမှာ OLED ပါဝင်ပြီး စျေးသက်သာတဲ့ Mid-range နဲ့ Budget ဖုန်းတွေမှာ LCD ပါဝင်တာလဲ?
သိသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို မျှ‌ဝေပေးမှာမို့ ဒီစာလေးကို ပြီးတဲ့အထိ ဖတ်စေချင်ပါတယ်ဗျ။
LCD နဲ့ OLED ဘယ်လို ကွာခြားပြီး ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ?
LCD နဲ့ OLED နှစ်ခုရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေဟာ အတော်လေး မတူညီပါဘူး။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွေကို လျော့ပြီး နားလည်လွယ်အောင် အကြမ်းဖျင်းလေးရှင်းပြရရင်တော့ Display တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မြင်နိုင်တဲ့ ပုံရိပ် ဖော်ပြဖို့ Pixels လို့‌ ခေါ်တဲ့ ပင်အပ် ထိပ်ဆူးလောက်‌ အရွယ်အစား ရှိတဲ့ အစက်အပြောက်လေးတွေ အများကြီးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
LCD ရဲ့ အရှည်က Liquid Crystal Display ဖြစ်ပြီး သူ့မှာပါတဲ့ Pixels လေးတွေက ကိုယ်တိုင် အလင်း မထုတ်လွှတ်နိုင်လို့ (Backlight ဆိုတာနဲ့) အဲ့ဒီ Pixels လေးတွေကို နောက်ကနေ အလင်းပေး ပုံရိပ် ဖော်ပြရပါတယ်။ ဒီတော့ LCD Display တွေဟာထူလေ့ရှိပါတယ်။
OLED ရဲ့ အရှည်က Organic Light Emitting Diode ဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ပုံရိပ် ဖော်ပြဖို့ အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ Pixels လေးတွေ ကိုယ်တိုင်က အလင်းထုတ်လွှတ် ပေးပါတယ်။ OLED Display တွေဟာပါးလွှာပါတယ်။
*LCD မှာ IPS, LTPS IPS,TFT,VA,… ဆိုပြီး LCD အမျိုးရှိပေမယ့် အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံချင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။
*OLD မှာလည်း PMOLED,AMOLED,TOLED,FOLED,…ဆိုပြီး OLED အမျိုးရှိပေမယ့် အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံချင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။
LCD နဲ့ OLED နှစ်ခုရဲ့ အားသာချက် အားနည်ချက် တွေက…?
LCD နဲ့ OLED နှစ်ခုလုံးမှာ ပြီးပြည့်စုံခြင်း မရှိပေမယ့် အားသာချက် အားနည်ချက် ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။
LCD ရဲ့ အားသာတဲ့ အချက်တွေကတော့ ထုတ်လုပ်ရလွယ်ကူလို့ ဈေးသက်သာပါတယ်။ ပုံရိပ်တွေ ပြသတဲ့ အခါ အရောင်မှန်ကန်မှု ရှိပါတယ်။ Burn-in လို့ခေါ်တဲ့ အချိန်ကြာလာရင် ဖြစ်တက်တဲ့ အရောင်/ပုံရိပ် စွဲထင်တွေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Brightness (တောက်ပမှု) မှာလည်း ကောင်းပါတယ်။
OLED ရဲ့ အားသာတဲ့ အချက်တွေကတော့ ပါဝါစား သက်သာလို့ အားကုန်သက်သာပါတယ်။ စိုစိုပြေပြေတောက်တောက်ပပ ရှိတဲ့ အရောင်တွေကို ထုတ်ပေးနိုင်သလို Deep Black လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝကျတဲ့ အနက်ရောင်တွေကို လည်းထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Viewing Angles ကောင်းလို့ အတည့်ပဲ ကြည့်ကြည့် တစောင်းပဲ ကြည့်ကြည့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။
* အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို OLED Display တွေဟာပါးလွှာလို့ အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတဲ့ In-display/Under-display Fingerprint Scanner တွေနဲ့ပါ တွဲဖက် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
LCD ရဲ့ အားနည်းတဲ့ အချက်တွေကတော့ Contrast Ratio လို့ခေါ်တဲ့ ‌ဖော်ပြတဲ့ ပုံရိပ်တွေရဲ့ အလင်းဆုံးနဲ့ အမှောင်ဆုံး အပိုင်းနှစ်ခုကို အချိုးချတဲ့အခါ နည်းပါတယ်။ တစ်ခြားနည်းနဲ့ ပြောရရင် အနက်ရောင်တွေကို ဖော်ပြတဲ့အခါ တကယ့် အနက်ရောင်တွေကို မဖော်ပြနိုင်ဘဲ မွဲတဲတဲ ဖြစ်နေတာပါ။ သူ့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံကြောင့် ပါဝါစားများပါတယ်။
OLED ရဲ့အားနည်းတဲ့ အချက်တွေကတော့ ထုတ်လုပ်ဖို့ (Oganic) သဘာဝ ပစ္စည်းတွေလိုအပ်လို့ စျေးကြီးပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ Burn-in လို့ခေါ်တဲ့ အရောင်/ပုံရိပ် စွဲထင်တွေ ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်မားပါတယ်။
LCD နဲ့ OLED နှစ်ခုထဲမှာ ဘာကို ရွေးသင့်သလဲ…?
နှစ်ခုလုံးက ကောင်းပါတယ်။ LCD Display နည်းပညာတွေဟာ ပိုပိုကောင်းလာသလို OLED Display နည်းပညာတွေကလည်း တ‌ဖြေးဖြေး စျေးသက်သာလာပါတယ်။
ဘာကို ရွေးသင့်သလဲ ဆိုတာကတော့ သင့်အကြိုက် နဲ့ သင့် အိတ်ကပ် ဖောင်မဖောင်း အ‌ပေါ်မှာ မူတည်ပါမယ်။ ဘတ်ဂျက် အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ LCD တွေနဲ့ပဲ သင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ OLED တွေက အခု အခြေအနေအရ တန်ဖိုးမြင့် တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ ရနေလို့ပါ။
ဘာကို ရွေးချယ်ရမလဲ/ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ရမလဲ …?
LCD နဲ့ OLED နှစ်ခုလုံးမှာ ပြီးပြည့်စုံခြင်း မရှိပေမယ့် အားသာချက် အားနည်ချက် ကိုယ်စီရှိကြတာကိုလည်း လက်ခံတယ်။ အပေါ်မှာ ရှင်းပြခဲ့တာတွေကိုလည်း နားလည်တယ် ဒါပေမယ့် အားမရသေးဘူး တစ်ခုခုလိုနေသလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာကို ဖတ်နေတာ ရပ်လိုက်ပြီး နီးစပ်ရာ ကျွန်တော်တို့ Anycall Mobile Shop တွေကို လာရောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာ စမ်းသပ်ကြည့်ရှု့ဖို့ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ…။
Flagship Killer တွေကို Kill မယ့် Realme X2 Pro (သို့) Realme ရဲ့ပထမဆုံး Flagship ဖုန်း
Google Pixel4(သို့)Leak အဖြစ်ဆုံး ဖုန်း…
Nyein Aung Htet
Mi CC9Pro ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း အချို့…
Nyein Aung Htet,9months ago 1 min read
Apple Arcade ဆုိတာကဘယ္လုိမ်ိဳးလဲ
admin, 11 months ago 1 min read
Huawei P40 and P40 Pro တို့ရဲ့ Specs အပြည့်အစုံပေါက်ကြားလာ
Pyae Sone Hein Htet,4months ago 1 min read
လာမယ့် April 14 ရက်မှာ မိတ်ဆက်တော့မယ့် OnePlus 8 Series
RKhar Min Thant,3months ago 1 min read
Xiaomi Mi 10 မှာ 90HZ Screen နဲ့ 64MP Main Camera ပါဝင်လာမယ်။
Pyae Sone Hein Htet,6months ago 1 min read
မြင်တွေ့ရဦးမယ့် Realme Q Series ဖုန်းအသစ်များ
Nyein Aung Htet, 11 months ago2min read
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 120W Fast Charging ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ iQOO
လာမယ့် iPhone 12 Series တွင် OLED Display ကိုသာ အသုံးပြုသွားမည်ဟုဆို
Gauguin (ဂိုဂန်း) အမည်ရှိတဲ့ Line Up အသစ်ကို ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi
Samsung Galaxy Watch3ကို တွေ့ခွင့်ရတော့မှာလား ??
Samsung Galaxy Note 20 Series ရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ ထွက်လာပြီ..
ပိုကောင်းလာတဲ့ Features တွေနဲ့အတူ Fitness Band နယ်ပယ်မှာ ပွဲကြမ်းလာမယ့် Mi Band 5
78th Street, Between 27th & 28th Street, MahaAungMyay Township, Mandalay
9;00 AM - 6:00 PM
Copyright By Anycall Mobile | 2020